शिल्पाले प्रहरी सामु यस्तो सम्म गरिन्।कस्तो जीन्दगी कस्तो भयो? |
शिल्पाले प्रहरी सामु यस्तो सम्म गरिन्।कस्तो जीन्दगी कस्तो भयो?
August 11, 2021 August 11, 2021 adminLeaveaComment on शिल्पाले प्रहरी सामु यस्तो सम्म गरिन्।कस्तो जीन्दगी कस्तो भयो?
अभिनेत्री शिल्पा शेट्टीका पति राज कुन्द्रा एडल्ट फिल्म बनाएको आरोपमा पक्राउ परेका छन् । राज कुन्द्रा भारतका धनाड्य व्यक्तिको सूचीमा पर्छन् ।उनले नेपालबाट पश्मिनाको व्यापार गर्दै व्यवसायिक जीवनको यात्रा सुरु गरेका थिए । त्यसपछि उनी विभिन्न व्यवसायमा जोडिए र मनग्ये आम्दानी पनि गरे ।पछिल्लो समय भने उनको जीवनमा ठूलो धक्का लागेको छ । पो र्न मुभी बनाएको र बेचेको आरोपमा उनी पक्राउ परेका छन् । उनको यो धन्दाबारे प्रहरीसँग पुग्दो प्रमाण भएको बताइन्छ ।राज कुन्द्रा काण्डमा उनकी श्रीमती एवं अभिनेत्री शिल्पा शेट्टीलाई पनि जोडेर अनेकन आशंका गरिदैछ । श्रीमानको धन्दामा उनको भूमिका के हुन्थ्यो भनेर सोधीखोजी भइरहेको छ । त्यसो त शिल्पा राज कुन्द्राका केही कम्पनीका व्यवसायिक साझेदार पनि हुन् । शिल्पा शेट्टीको नाममा २३ कम्पनी छन् र उनका श्रीमान ९ कम्पनीको मालिक हुन् ।
गएको सुक्रबार मुम्बई क्रा इम ब्रान्चले शिल्पा र राजको जुहूस्थित घरमा छा-पा मा-रेको थियो । त्यहाँ प्रहरीले राजलाई पनि साथमा लिएर गएको थियो । यस क्रममा शिल्पा शेट्टी र उनका श्रीमान्बीच निकै चर्काचर्की भयो ।प्रहरीले शिल्पालाई पनि लामो समय बयान लिए । अभिनेत्री शिल्पाले आफुलाई हटशट एपको बारेमा केही थाहा नभएको जिकिर गरिन् । यद्यपि प्रहरीले सोधपुछ गरिरहँदा उनी निकै डराएकी थिइन् ।जब प्रहरीले राजलाई उनको घर लगेर गए, तब शिल्पा र राजबीच लामो समय विवाद भयो । त्यस क्रममा शिल्पा स्वयम्ले आफुलाई सम्हाल्न सकिनन् र चिच्याई–चिच्याई रोइन् । प्रहरीसँगको बयानको क्रममा पनि शिल्पा एकदमै उदास थिइन् ।
प्रहरीसँगको सोधपुछमा शिल्पाले बताइन् कि उनका पति राजले कुनै पो-र्नोग्राफिक कन्टेन्ट बनाइरहेका थिएनन् । तर, उनले गरिरहेको तयारी भने पो र्न वा ए डल्ट नभई इरोटिक कन्टेन्ट थियो, जुन वेब सिरिजको रुपमा केही ओटिटि प्लेटफर्ममा उपलब्ध छ ।मुम्बई क्रा-इम ब्रान्चको टिमले शिल्पाको बैंक एकान्ट पनि जाँच गरेको थियो । किनभने शिल्पा भियान उद्योगका निर्देशक रहिसकेकी छिन् । अघिल्लो बर्ष उनले यस उद्योग दर्ता गरेकी थिइन् । यस उद्योगसँग जोडिएको कारण शिल्पालाई फेरी पनि सोधपुछ गर्न सक्नेछ ।जब राज कुन्द्रामाथि अनुसन्धान सुरु भयो, शिल्पा पनि शं-काको घेरामा परिन् । उनीमाथि प्रहरीले निगरानी गरिरहेको छ । राजको धन्दामा उनले कस्तो भूमिका खेलिरहेकी थिइन् ? प्रहरीले अनुसन्धान गर्दैछ ।
बालबालिकालाइ मास्क लगाइदिने गर्नु भएको छ भने भर्खरै आयो यस्तो खबर।एकचोटी अवश्य जानकारी लिनुहोला
नेपालमा आज पनि ठुलो संख्यामा थपिए नयाँ को-रोना संक्रमित,यति धेरैको मृ-त्यु,कुन जिल्लामा कति संक्रमित थपिए?
सुशान्त मृ’त्यु प्रकरण: आफैले बुनेको जालमा फसिन् रिया, गि’रफ्तार हुन सक्ने
अमेरिकामा पतिसँग रोमान्टिक मुडमा देखिईन गायिका अन्जु पन्त-तस्विर सहित हेर्नुहोस
परिवारसँग रमाउदैँ प्रियंकाःपेटको बच्चाको आवाज सुन्दै देवर(फोटो फिचर)
‘हजुर र म भोली से,’क्स गर्नी है’ भन्दै महिला शिक्षकलाई यौ,’न प्रस्ताव राख्ने शिक्षक फ,’सादमा October 23, 2021
फिल्म फ्लप भएपछी फेरी निहु खोज्न थाले शोभित,एकाएक फेरे बोलि।अब यो सुन्दा सारा नेपालीको पारा फेरी तातिने भयो October 23, 2021
फेरि अर्को दु’खत खबर!बैतडीमा ५ वर्षीय बालकसहित दुई जना मृ’त अबस्थामा फे’ला October 23, 2021
उनी हुन् पाँच भाईकी एक्ली पत्नी,जन्मिएको छोरा कोबाट भयो पत्ता लगाउने विधि कस्तो? October 23, 2021
प्रेमीकासँग होटल गएका सलमानको मृत्यु,कारण खुल्दा प्रहरी नै झस्कियो। October 23, 2021
मुखमा देखिने यी सामान्य लक्षणलाई नगर्नुहोस् वेवास्ता,क्यान्सरको लक्षण पनि हुनसक्छ October 23, 2021
घरमा आएका जुनसुकै पाहुनालाई पनि कहिल्यै नसोध्नुहोस यी ३ प्रश्न,नराम्रो हुनेछ। October 23, 2021
पुराना मोबाइल छ भने नफाल्नुहोस्,यसरी राखिएको हुन्छ भित्र सुन।भटाभट निस्किन थाल्यो सुन October 23, 2021
‘अमेरिकीन बच्चा’ जन्मिएपछी परिवारलाई लाग्यो शंका,सत्य थाहा पाउदा उडायो होश! October 23, 2021
आजको मौसम:काठमाडौंमा बढ्यो चिसो, देशभर कहाँ वर्षा हुदै छ? October 23, 2021